DAAWO: Odayaasha Baladweyne oo diiday talaabo uu amray RW Kheyre, si adagna uga hor yimi.
BALADWEYNE(P-TIMES) – Odayaasha dhaqanka ee gobalka Hiiraan ayaa diiday in ciidamo dhawaan ay u tababartay dawladda FAderaalka Soomaaliya, kuwaas oo kusugnaa duleedka magaalada Baladweyne loo qaado gobalka Galguduud, gaar ahaana magaalada Dhuusa-Mareeb oo ay ka socdeen shirar dibu heshiisineed, waxayna sheegeen in aysan arrimahaas yeeli doonin.
Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo dhawaan la kulmay Saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ee ka yimi Galguduud ayaa u sheegay in ciidamadaas ay yihiin kuwa Soomaaliyeed, balse loo tababaray sidii ay ula dagaalami lahaayeen Shabaabka kusugan gobalka Hiiraan.
Taliyaha ciidamada dawladda Faderaalka ee kusugan gobalada dhexe qeybta 21aad Qooje-Dagaari oo gaaray Baladweyne, ayaa u sheegay Odayaasha dhaqanka in ay doonayaan in ciidamadaas ay u qaadaan gobalka Galguduud, si ay Shabaab uga saaraan deegaanada gobalkaas.
Odayaashan oo wariyayaasha kula hadlay Baladweyne, ayaa sheegay in ay deegaanadooda u baahan yihiin in looga xoreeyo Al- Shabaab, balse aan wiilashooda loo adeegsan doonin arrimo Siyaasadeed oo kajira gobalka Galguduud, iyagoo shegay in talaabada dawladdu ay tahay wax aan la qabali karin.
Duqowda dhaqanka dalabka kasoo yeeray ayaa ku soo beegmaya xili dhawaan ra`iisulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu sheegay in ay xoreynayaan gobalka Galguduud oo ay isku duba ridayaan howlgal qorsheysan oo ay ku qaadi doonaan deegaanada Shabaab kaga sugan yihiin Galmudug.